Banyere Anyị - Wenzhou Charmhome Electronic Technology Co., Ltd.
Egwuregwu ezé eletrik
Travel Nha nha ezé
Charmhomebụ enterprise na zuru onwe ha R & D na mmepụta ikike.Our ngwaahịa na-agụnye onu ihicha, ahụ ịhịa aka n'ahụ, ngagharị mweghachi na ndị ọzọ na ike electronic ngwaahịa. Anyị nwere otu ndị otu ọkachamara ọkachamara nwere ọganiihu mmepe mmepe yana ikike ọhụụ nwere ike iji ihe okike AI wee nyere nnukwu ego aka ịmepụta ọtụtụ usoro ngwaahịa yana nchekwa zuru oke na afọ gara aga.
A kwadoro Charmhome asambodo, dịka ISO9001, CE, RoHS, FDA, FCC. Ugbu a, anyị nwere ọtụtụ usoro mmepụta nke oge a maka ngwaahịa kọmputa na China. Anyị na-agbaso echiche njikwa nke ndị mmadụ, ndị sayensị na nke ziri ezi. Maka anyị, mmetụta magburu onwe ya na uru bara uru site na ndị ahịa bụ ịchụso ọdịbendị dị mma.
Dị ka ịgbasa ụlọ ọrụ, Charmhome na-emepe emepe nke ika, na-anabatakwa imekọ ihe ọnụ na OEM & ODM oru ngo. Anyị na-agbaso echiche nke ijere ndị ahịa ozi ozugbo, ebupụla ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba site na Alibaba, Amazon, Lazada wdg. Na-agbaso ụkpụrụ nke ijere ndị ahịa ozi, ndị ahịa amatala ngwaahịa Charmhome n'ọtụtụ ụlọ na obere oge.
Charmhome otu ga-rube isi na echiche nke ezi obi imekọ ihe ọnụ na-enwe n'ihu, na-agbalị kasị mma ime ka ngwaahịa na-adị kwa ụbọchị dị mkpa maka ndị nkịtị.Welcome vist anyị ụlọ ọrụ na-achọ a mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ.
Sonic Electric Nha nha
No.301 Wanxiang Road, ngwá ụlọ Park, Wanquan Industry Base, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China